Home » Travel Associations News » Gloria Guevara hasolo an'i Julia Simpson, ho filoha & CEO an'ny WTTC
Mpikambana komity mpanatanteraka International Airlines Group (IAG), Julia Simpson nanendry ny filoha & Tale Jeneralin'ny WTTC vaovao
WTTC dia manambara ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka International Airlines Group (IAG), Julia Simpson, ho filoham-pirenena & CEO, manomboka ny 15 Aogositra.
WTTC dia nanambara ny fiovan'ny fahaiza-mitarika amin'ny fanambarana CEO vaovao hitarika ny World Council and Travel Council
Niainga i Gloria Guevara rehefa afaka efa-taona nitarika ny rafitra fizahan-tany manerantany
Julia Simpson handray ny toeran'ny filoha & Tale Jeneralin'ny WTTC vaovao
The World Travel & Tourism Council (WTTC) dia nanambara ny fialàn'i Gloria Guevara taorian'ny efa-taona nitarihany ny fikambanana fizahan-tany manerantany izay matetika no hita ho solontenan'ny orinasa tsy miankina lehibe indrindra amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Ny sekretera taloha momba ny fizahantany any Mexico, Guevara, dia nanatevin-daharana ny WTTC tamin'ny volana aogositra 2017, dia nitarika ny WTTC sy ny mpikambana ao aminy nandritra ny fandaharam-panovana nandritra izay taona lasa izay, ary ao anatin'izany ny fiatraikany lehibe teo amin'ny sehatry ny COVID-19. I Guevara no feo mafy nitarika ny sehatry ny Travel & fizahan-tany manerantany tamin'ny taona sarotra indrindra teo amin'ny tantara ary nanampy tamin'ny fampiraisana ny sehatra sy ny famaritana ny làlan'ny fanarenana.
Nilaza ny WTTC: Faly izahay manambara ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka International Airlines (IAG), Julia Simpson, ho filoham-pirenena sy CEO, manomboka ny 15 Aogositra.
Nilaza i Gloria Guevara eTurboNews:
Julia dia manana traikefa lehibe amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana
Izy dia mpitarika mafy orina izay hitondra ny WTTC amin'ny ambaratonga manaraka
Simpson dia mitondra traikefa lehibe amin'ny sehatry ny Travel & fizahan-tany, izay nanompo tao amin'ny birao British Airways, Iberia ary farany indrindra ho Chief of Staff ao amin'ny International Airlines Group. Niasa tamin'ny ambaratonga ambony tao amin'ny Governemanta UK izy taloha, anisan'izany ny mpanolotsaina ny praiminisitra UK.
Juergen Steinmetz, filohan'ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) niarahaba an'i Julia Simpson tamin'ny asany vaovao. Vonona ny WTN hanohy hiara-miasa amin'ny WTTC amin'ny fomba iraisana amin'ny ho avin'ny fizahantany. Ny WTN dia mirary ny soa indrindra ho an'i Gloria amin'ny fanendrena azy amin'ny ho avy ary nisaotra azy noho ny famaliany, ny fisokafany ary ny fisakaizany nandritra ny taona maro.
Nahavita nampitambatra ny sehatra i Gloria, afaka namaritra ny làlan'ny fanarenana izy, namarana ny fanambarana G20, ary namoaka ny hetsika fizahan-tany eran-tany voalohany, ny Vovonana WTTC tany Cancun, Mexico tamin'ny volana lasa teo. ”
Ny filoham-pirenena sy ny CEO an'ny Carnival Corporation, Arnold Donald, izay notendrena ho filohan'ny WTTC, dia nanome voninahitra an'i Gloria Guevara ary niarahaba an'i Julia Simpson tamin'ny anjara asany vaovao.
Hoy i Donald: "Misaotra an'i Gloria aho tamin'ny fanoloran-tenany sy ny fanoloran-tenany ho an'ny WTTC, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao. Tsy tambo isaina ny fandraisany anjara, avy amin'ny fanampiana hampivondrona ny sehatra satria mitantana sy sitrana amin'ny areti-mandringana, ka manome feo sy torolàlana mazava ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny dia iraisam-pirenena. Ary izaho sy ny komity mpanatanteraka iray manontolo dia feno fankasitrahana noho ny fanampian'i Gloria tamin'ny alàlan'ity tetezamita ity sy ny fanohanany ny WTTC.
“Faly aho mandray an'i Julia Simpson, mpitarika miavaka iray manana traikefa amin'ny sehatra tsy miankina na amin'ny governemanta, hanampy amin'ny fitarihana ny WTTC amin'ity fotoana mitsikera ny sehatry ny Travel & fizahan-tany ity. Manantena ny hiara-hiasa amin'i Julia amin'ny andraikiko amin'ny maha Lehibahoako aho, hanohy hanangana ireo tetik'asa mahomby maro nataon'ny WTTC. ”
Hoy i Gloria Guevara: “Amin'ny fo mavesatra no ialako amin'ny WTTC. Tena faly aho fa nitarika an'ity ekipa isan-karazany sy manan-talenta ity ary niara-niasa tamin'ny mpitarika indostrialy mahatalanjona, izay Mpikambana ao amin'ny WTTC, ary nanorina fifandraisana matanjaka tamin'ireo lehiben'ny fizahantany ao amin'ny governemanta manerantany.
“Miala amin'ny WTTC aho rehefa nahavita ny baikoko, amin'ny toerana matanjaka kokoa noho ny feon'ny sehatra tsy miankina sy ny mpitarika ny fandaharam-potoana manerantany. Fantatro fa eo ambany fitarihan'i Julia matanjaka, WTTC dia hanohy hanangana ity lova ity ary hitarika azy ho any amin'ny toko manaraka, izay manome ny lohateny ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany ho amin'ny fahasitranana ”.
Julia Simpson dia nilaza fa “Tombontsoa lehibe ny mitarika WTTC rehefa mivoaka avy amin'ny krizy ratsy indrindra teo amin'ny tantarantsika izy. Ny Travel & fizahan-tany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny toekarentsika manerana an'izao tontolo izao, mitaky asa 330m amin'ny taona 2019. Amin'ny vondrom-piarahamonina maro dia ivon'ireo orinasam-pianakaviana avela potika tanteraka izany.
“Ny sehatry ny Travel & fizahan-tany dia nampiseho tena fitarihana amin'ny 'fanokafana' an'izao tontolo izao amin'ny fomba azo antoka sy azo antoka; ary manantena aho ny hamolavola sy hitarika ny fandaharam-potoanan'ny sekta ambiny hahatrarana ny fitomboana maharitra sy ny fampidirana. ”